Cnc Lathe, Mashiinka Lathe Cnc, Vertical Lathe - Lu Young
Mashiinka Lathe CK6163 CNC
Qalafsanaanta sare ee shubista lama huraanka ah
Nolosha adeegga muddada dheer ee dariiqyada birta-birta-birta ah
Jaban oo saxsan
Shandong Lu Young Makiinado Co., Ltd.
Qalabkeena mashiinka cnc-ka waa la dhoofiyay
in ka badan 40 dal oo ay helaan jawaab celin wanaagsan.
Muuqaalka 1. Ku habboon fo ...
Muuqaalka 1. Heerka sare ...
VMC850 Shiineys 3axis toosan cnc toosan ...
Faahfaahinta Poduct 1. CNC ...
VMC650 Xawaaraha Sare 3 dhidibka bir bi'is CNC ...
Qaabeynta heerka 1. 3 ...
VMC420 Shiinaha 3 mashiinka axdi qarameedka CNC biraha
Muuqaalka alaabta 1. Daarista: ...
ck0640 Mini biraha baandada nooca mashiinka qalabka ...
Astaamaha ugu muhiimsan CK0640 H ...
Guud 1. Marka ...
Faa'iidooyinka mashiinka ilaa ...
Astaamaha 1. Isku-darka c ...
Isku soo xoori ...
Faa'iidada 1. Ikhtiyaar ah ...
Waxqabadka qalabka ...
Shandong Lu Young Makiinado Co., Ltd. waxaa la aasaasay bishii Julaay 1996. Waxaan ku sugnaa shandong provice. Waxaan ka soo dhoofsanay tikniyoolajiyad wax soo saar horumarsan iyo kooxda R&D kooxda Kuuriya sanadkii 2001 waxaana dhisnay warshaddeena sedexaad ee wax soo saarka mashiinka lathe ee swiss. Waxaan soo saari karnaa in kabadan 1000 nooc qalabka mashiinka cnc hal sano. Qalabkeena mashiinka cnc-ka waxaa laga dhoofiyay in ka badan 40 dal oo ka hel jawaab celin wanaagsan.
Arimaha u baahan fiiro gaar ah marka lagu farsameynayo qalabka isku dhafan mashiinada wax lagu shiido ee CNC (xarumaha makiinadaha)
Abriil / 09/2021
1. Maxay yihiin walxaha isku dhafan? Qalabka isku dhafan waxaa loo qaybin karaa birta iyo walxaha isku dhafan, qalabka biraha iyo biraha, qalabka biraha iyo biraha aan ahayn. Marka loo eego astaamaha qaabdhismeedka, waxaa jira qalabyada isku dhafan ee soo socda: Fiber c ...
Febraayo / 28/2021
Horumarinta aaladaha mashiinka ayaan laga maarmi karin baahiyaha horumarineed ee warshadaha wax soo saarka mustaqbalka. Tusaale ahaan, horumarinta warshadaha sida tamarta, cuntada, injineernimada caafimaadka, isgaarsiinta, gawaarida iyo mashiinada beeraha waxay saameyn weyn ku yeelan doonaan horumarka ...
Qalabka mashiinka CNC waa soo gaabinta qalabka mashiinka kumbuyuutarka lagu xakameeyo, kaas oo ah qalab mashiin si otomaatig ah ugu qalabeysan nidaam lagu xakameeyo barnaamijka. Nidaamka xakamaynta ayaa si macquul ah ugu shaqeyn kara barnaamijka lambarrada xakamaynta ama tilmaamo kale oo astaamo ah, oo qayaxaya, si loo sameeyo aaladda mashiinka mo ...
Qalabka makiinadaha ayaa galaya xilligii digitationynta iyo sirdoonka
In geeddi-socodka ah ee isbeddelka digital, shirkadaha qalabka mashiinka Shiinaha ayaa wajahaya wareejin ka "fikirka wax soo saarka" in ay "bixinta injineernimada" sida ay fikirka ganacsi aasaasiga ah. Tobannaankii sano ee la soo dhaafay, xulashada qalabka mashiinka waxay ku saleysneyd shaybaarro. Gaarsiinta ugu dambeysa ee qalabka ...